what, when, why: कसरी आफ्नो mp3 फाइलहरुको Volume लाई Same Volume मा Adjust गर्ने ?
कसरी आफ्नो mp3 फाइलहरुको Volume लाई Same Volume मा Adjust गर्ने ?
तपाईंलाई अवस्य पनि यो मन पर्दैन होला कि आफ्नो कम्प्युटरमा भएका mp3 गीतहरु कुनै ठुलो र कुनै सानो आवाजमा play भएको । मलाई पनि कहिले काही गीतहरु play गर्दा कुनै गीत ठुलो आवाजमा र कुनै गीत सानो आवाजमा बज्दा नमज्जा लागेको र आफ्नो player को volume लाई adjust गर्दा गर्दा हैरान भएको अनुभब छ । कहिले काही यो सोच्ने गर्थे कि हामीले आफ्ना सबै mp3 फाइलहरुको Volume लाई same बनाउन सक्दैनौ र ? तपाईंले पनि शायद यस्तै समस्या भोग्नु भएको होला र मैले जस्तै सोच्नु भएको होला ।
यस्तैमा मैले एउटा यस्तो software फेला पारें जुन software ले हामीले सोचेकै जस्तो काम गर्छ । फ्री मा उपलब्ध यो MP3Gain नामक software को मद्घतले हामीले आफ्ना mp3 गीतहरुको Volume लाई Same बनाउन सक्छौ ।
MP3Gain एउटा simple application हो र यसले गर्ने main काम भनेको MP3 फाइलहरुलाई Analyze र Automatically Adjust गरेर पछि play गर्दा सबै फाइलहरुको volume Same बनाउने । जब हामीले कुनै MP3 फाइललाई यो application को मद्घतले adjust गर्छौ यसले उक्त फाइललाई decoding वा re-coding नगरीकनै यो काम गर्छ जसको कारणले फाइलको Quality मा केही फरक हुँदैन । तपाईंले जती चोटि पनि उक्त फाइलको volume लाई adjust गर्न सक्नु हुन्छ र फाइलको quality तपाईंले adjust गर्नु भन्दा अगाडि जस्तो थियो त्यस्तै नै हुन्छ ।
लौ त तपाईं पनि एक चोटि Try गरेर हेर्नुहोस् न त !!!